China Crimped Wire harato mpanamboatra sy mpamatsy | Da Shang
Rehefa zava-dehibe ny faritra malalaka, ny crimps fanampiny eo anelanelan'ny fihaonan-dàlana dia manome tenona henjana kokoa ary manome fanidiana sy tery ho an'ny tariby maivana mifandraika amin'ireo varavarana lehibe.
Noho ny fizotran'ny crimping, ny harato dia manana vava tena marina sy tsy miova ary voarary aorian'ny crimping. Matetika dia aleony amin'ny efijery mihetsiketsika sy fampiharana maro hafa izay misy fitsikerana lehibe. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fikandrana, fizarazarana, fanonoana hena sy sivana na lafarinina na efijery an'ny fitrandrahana.
* Karazan-jiro mahery vaika mahazatra mahazatra. Ampiasaina amin'ny toerana kely dia kely ny fanokafana raha oharina amin'ny savaivony tariby.
* Crimping mihidy-Ampiasaina amin'ny famaritana madinidinika fotsiny mba hitazomana ny fahamendrehan'ny tenona mandritra ny fiainana an-tsary, izay lehibe ny fanokafana momba ny savaivony tariby.
* Crimping tampon-fisaka-Matetika manomboka amin'ny 5/8 ″ (15.875 mm) misokatra sy lehibe kokoa. Manome fiainana maharitra mahatohitra maharitra, satria tsy misy vinavina hitafy eo amboniny. Manolotra fanoherana faran'izay kely indrindra amin'ny fikorianana. Tena malaza ihany koa amin'ny rindranasa maritrano sy ny firafitra sasany izay irina fisaka malefaka amin'ny lafiny iray.
* Inter Crimp-Ampiasaina amin'ny tenona matevina tariby maivana kokoa mba hanomezana fitoniana bebe kokoa, fahamafisan'ny tenona ary henjana ambony indrindra. Mateti-pitranga eo amin'ny vavahady misokatra lehibe kokoa noho ny 1/2 ″ (12.7 mm).
Ny vokatra mavesatra vita amin'ny tariby mavesatra dia ampiasaina matetika ho efijery amin'ny fitrandrahana, ozinina arintany, fananganana na indostria hafa.
Karazan-jiro crimped tariby karazana hazavana azo ampiasaina handrahoana, ny endrika mety ho boribory, toradroa, miolakolaka sns. Izy io dia ampiasaina handrahoana sakafo na hena, ary fanoherana ny hafanana, fanoherana ny harafesina, tsy misy poizina, tsy misy tsirony ary mety amin'ny fikirakirana.
Endri-javatra ny Crimped Wire Mesh
-Fanoherana fanoherana avo
-Mora ny mametraka
-Mora tapaka mba hifanaraka
Fitaovana ho an'ny Crimped Wire Mesh
-P vy vy
-Ny vy vy mahery
-Ny vy nandrisika
Manaraka: Stainless Steel Welded Wire harato